Tadalafil Powder tsara indrindra (171596-29-5) China Factory
Tadalafil vovoka (171596-29-5)
Isika no mpamokatra lehibe indrindra amin'ny vovoka Tadalafil any Shina
Vidéo vidéaire Tadalafil
Product Name Tadalafil poids
Anarana simika (6R,12aR)-6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methylpyrazino[1′,2′:1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione
Drug Class PAH, PDE-5 Inhibitors; Phosphodiesterase-5 Inhibitors Enzyme
molekiolan'ny Formula C22H19N3O4
mitsonika Point 298-300 ° C
Ny antsasaky ny biolojia 17.5 ora
Solubility Azo levona ao amin'ny DMSO (78 mg / ml amin'ny 25 ° C), methanol, rano (<1 mg / ml amin'ny 25 ° C), dichloromethane, ary éthanol (<1 mg / ml amin'ny 25 ° C)
Storage Temperature Mitahiry amin'ny mari-pana amin'ny efitra eo anelanelan'ny 59 ° F sy 86 ° F (15 ° C sy 30 ° C). Aza mitahiry izany fanafody izany amin'ny faritra mando na mando.
Tadalafil Application Taratasy fanenan-koditra vita amin'ny tavy Tadalafil, siramamy ara-piraisana, kafe ara-pananahana ets.
Ny erectile erectile dia aretina mahazatra eo amin'ny lahy sy ny vavy izay miantraika amin'ny 52 isan-jaton'ny lehilahy mihoatra ny 18 taona, manerantany. Ny fiovana amin'ny hamafin'ny fihenan'ny erectile dia matetika vokatry ny fihenan'ny rà mandriaka mankamin'ny lalan-drà penile, izay ny dingana lehibe indrindra amin'ny famoronana fananganana.
Ny erectile erectile dia aretina azo tanterahina sy azo sitranina tanteraka miaraka amina fanafody samihafa mikendry anzima manokana ao amin'ny rindrin'ny lalan-drà penile. Ny iray amin'ireo fanafody mahery vaika indrindra amin'ny ED dia ny vovoka Tadalafil miaraka amin'ny antsasaky ny ainy 17.5 ora.
Inona ny Tadalafil Powder?
Tadalafil Powder dia an'ny sokajy fanafody famporisihana ny lahy sy ny vavy satria fanafody natao ho an'ny lehilahy mihoatra ny 18 taona, mijaly noho ny tsy fitrangan'ny erectile. Tadalafil, na (6R-trans) -6- (1,3-benzodioxol-5-yl) -2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methyl-pyrazino [1 ＇, 2＇: 1,6 , 3,4] pyrido [1,4-b] indole-XNUMX-dione dia zava-mahadomelina mitovy amin'i Sildenafil na Viagra, amin'ny hetsika, fa tsy mitovy amin'ny firafiny. Tadalafil koa dia tsy mitovy amin'ny fanafody tsy fetezan'ny erectile mahazatra, Viagra, amin'ny tanjaka satria matanjaka sy mahomby kokoa noho ity farany.
Tadalafil Powder dia zava-mahadomelina mpanakana PDE5, izay midika fa mikendry ny anzima PDE5 hita ao amin'ny selan'ny hozatry ny lalan-dra. Ny fihenan'ny fiasan'ny fanafody dia mahasoa satria ny tena tanjon'ny anzima dia ny miteraka vasoconstriction, izay ao amin'ny lalan-drà penile, dia miteraka fihenan'ny rà mandriaka ary tsy fahatomombanan'ny erectile.
Tadalafil Powder dia novokarin'ny Pharmax Lifesciences ary azo ampiasaina amin'ny fitsaboana mihoatra ny tsy fitrohana erectile. Tadalafil Powder dia voatendry ihany koa ho an'ny lehilahy mijaly amin'ny hyperplasia prostatic benign ary koa ny hypertension arterial pulmonary. Na izany aza, ny Tadalafil Powder dia tsy mandaitra amin'ny fitsaboana aretina hafa amin'ny firaisana ara-nofo amin'ny lahy sy vavy.
Tadalafil dia mpanakanana mahery vaika PDE5, misy amin'ny endrika sy dosie isan-karazany, manamora ny fihinanana azy ho an'ny marary. Ny fanafody dia misy amin'ny endrika pilina na kapsily, miaraka amin'ny 5 mg, 10 mg, ary 25 mg. Zava-dehibe ny manamarika fa ny fatran'ny Tadalafil dia tsy mitovy amin'ny orinasa mpamokatra.
Tadalafil koa dia misy amin'ny endrika vovoka, na dia amidy am-piasana aza ny ankamaroany. Ity no antony lehibe ao ambadiky ny fiantsenana ambongadiny Tadalafil Powder izay malaza amin'ny endrika an'io fanafody io. Ity takelaka ity dia amidy amina kaontenera 25 kg ka hatramin'ny 50 kg, miankina amin'ny takiana ambongadiny.
Ny fatra ankapobeny ho an'ny vovoka Tadalafil, hanombohana azy dia 10 mg. Ny fatra avo indrindra, ao anatin'ny 24 ora, dia 20 mg, ary ny soso-kevitra mihoatra ny fatrany dia tsy tokony hasaina.
Ity fanafody ity dia azo antoka ho an'ny fihinan'ny olombelona satria nahazo fankatoavana sy fankatoavan'ny FDA avy amin'ny manampahefana Indiana, Kanadiana, Aostraliana ary British Health. Nanaiky ny fampiasana pilina Tadalafil ny FDA tamin'ny taona 2002, ary fotoana fohy taorian'izay dia nankatoavin'ny FDA ihany koa ny fampiasana vovo-tadalafil.
Ny pabrikan'ny mpanamboatra vovoka Tadalafil dia milaza fa manamboatra fanafody tokana-tokana amin'ny alalàn'ny tena marina. Ireo mpanamboatra dia manaja fatratra ny fiarovana ny olombelona, ​​izay natao mazava tsara amin'ny tanjaka, fiarovana ary fahombiazan'ny vokatra farany.
Ahoana no fiasan'ny vovoka Tadalafil?
Tadalafil Powder dia misy Tadalafil, fitambaran-tsakan'ny PDE5 izay nokarohin'i GlaxoSmithKline tamin'ny voalohany taorian'ny nahitana an'i Sildenafil, fitambarana mitovy amin'izany. Sildenafil, etsy ankilany, dia nokarohina voalohany ho fitsaboana ny angina sy ny fiakaran'ny tosidrà fa ny fandinihana manontolo dia nesorina taorian'ny valiny tsy nahomby tamin'ny dingana voalohany tamin'ny fandalinana. Na izany aza, rehefa nojerena dia hita fa i Sildenafil dia mety afaka mamorona fananganana raha toa ka voataona ara-nofo tsara ireo marary.
Satria ny sildenafil dia mpanakana ny PDE5, GlaxoSmithKline dia nanapa-kevitra ny hanao fikarohana be dia be amin'ny compound miaraka amin'ny mekanisma asa mitovy amin'ny Sildenafil. Ity fikarohana ity dia nitarika ny fahitana ary avy eo ny fampandrosoana ny Tadalafil.
Tadalafil dia mpanakan-tsokosoko PDE5 matanjaka miaraka amin'ny antsasaky ny ainy 17.5 ora izay maharitra 96 ​​ora mba hialana tanteraka amin'ny vatan'olombelona. Raha ampitahaina amin'ny pilina manga mahazatra, Viagra, izay mahomby mandritra ny 3 ora ka hatramin'ny 4 ora aorian'ny fihinana, dia mivoaka ambony i Tadalafil.
Ny fomba fiasa lehibe ananan'ny zava-mahadomelina dia ny fanakanana ny anzima PDE5 izay hita ao amin'ireo sela mihetsiketsika ao amin'ny lalan-drà penile. Ny fanakanana an'io anzima io dia miteraka vasodilation ary amin'ny farany, mihamitombo ny rà mandriaka ao amin'ny lalan-dra, izay voahodidin'ny corpus cavernosa. Ity hozatry ny filahiana ity, rehefa ampidinina amin'ny alàlan'ny fitomboan'ny rà mandriaka, dia voatsindry amin'ny toerana miorina, izay antsoina hoe fananganana.
Na izany aza, ny hozatra penile, mety ho marina ny corpus cavernosa, dia mila miala sasatra amin'ny voalohany mba hahafahan'ny lalan-drà hiparitaka sy mandray ra be loatra. Ity fialan-tsasatry ny hozatra malefaka ity koa dia vokatry ny fanakanana ny anaran'ny PDE5, na dia tsy mivantana aza. Ny fanakanana ny PDE5 dia miteraka fitomboan'ny Guanosine MonoPhosphate na GMP, izay zava-dehibe amin'ny fialan-tsasatry ny hozatra malefaka, toy ny corpus cavernosa.
Na izany aza, tsy izany irery no fampiasana sy fomba fiasan'ny Tadalafil Powder. Ny fanafody tsy misy fanafody dia ampiasaina ihany koa ho an'ny hyperplasia prostatic mahasalama, aretin-tsaina vokatry ny fanitarana ny fihary prostaty ary fanehoana ny fivalanana mangirifiry. Ny fomba fiasa ho an'ny fitsaboana ny fihary prostaty mihalehibe koa dia amin'ny alàlan'ny fitomboan'ny haavon'ny GMP amin'ny sela hozatra malama. Ny fialan-tsasatr'ireo sela ireo dia mamela ny fandehanan'ny urine bebe kokoa ary manakana ny fihazonana ny urine sy ny fanaintainana.
Tadalafil Powder dia voatendry ihany koa ho an'ny fiakaran'ny tosidran'ny aretin'ny havokavoka, satria ny fihenan'ny PDE5 dia tsy mampiakatra ny fikorianan'ny ra fotsiny fa mampihena ny tosidra koa, izay tena mahasoa amin'ny fitsaboana PAH.
Inona no azo ampiasaina amin'ny vovoka Tadalafil?
Tadalafil Powder dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ireto fepetra manaraka ireto:
Hyperplasia homamiadana mahasoa
Fiakaran'ny tosidran'ny fihenan'ny havokavoka
Na dia atao aza ny fikarohana momba ny fampiasana vaovao azo ampiasaina amin'ny fanafody, amin'izao fotoana izao dia natao ho an'ny lehilahy mihoatra ny 18 taona, mijaly amin'ny iray amin'ireo aretina voalaza etsy ambony ireo. Matetika, ny fanafody dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny erectile erectile.
Soa azo avy amin'ny vovoka Tadalafil
Tadalafil dia manana tombontsoa maro samirery ary raha ampitahaina amin'ny mpanohitra PDE5 hafa an'ny sokajy fanafody famporisihana ny lahy sy ny vavy. Io fanafody io dia mahery sy maharitra satria maharitra 36 ora vao voadio amin'ny rafitra, efa tsy afaka mandeha intsony rehefa afaka 96 ora. Ny vokatr'ilay zava-mahadomelina dia nanjary hita sy hita manodidina ny 20 minitra ka hatramin'ny 60 minitra taorian'ny fihinana, ary ny vovo-dronono Tadalafil dia mijanona mandritra ny 3 ora ka hatramin'ny 4 ora aorian'ny. Zava-dehibe ny milaza fa ny hetsika ny zava-mahadomelina dia tsy mitovy amin'ny faharetan'ny fananganana.
Tadalafil Powder dia tsy mahay mamorona fananganana tampoka ary mila fanentanana sy fanentanana mifanaraka amin'izany mba hahomby amin'ny famoronana fananganana. Raha misy ny fanentanana ara-nofo mandritra ny adiny efatra aorian'ny fihinanana fanafody, ny fanafody dia mety hamorona fananganana ary hanamaivanana ny soritr'aretin'ny tsy fetezan'ny erectile.
Ity zava-mahadomelina manaitaitra ny lahy sy ny vavy ity dia tena mandaitra amin'ny fitsaboana ny tsy fihenan'ny erectile vokatry ny fomba fiasa maharitra, izay mahatonga azy io ho zava-mahadomelina safidy ho an'ny maro mijaly amin'ny tsy fihenan'ny erectile sy ny hyperplasia prostatic. Tadalafil Powder dia azo ampifandraisina amin'ny Tamulsin, zava-mahadomelina mahery vaika hafa amin'ny fitsaboana hyperplasia prostatic benign na dia mbola mandinika sy mamakafaka aza ny fahombiazan'io fangaro fanafody io.
Dosis mety amin'ny vovoka Tadalafil
Tadalafil Powder, araka ny voalaza tetsy ambony, dia matetika manomboka amin'ny 10 mg ho fatra ambany indrindra azo atao. Aorian'ny herinandro farafaharatsiny hampiasana ny fanafody, ny doka dia mety hampihena, hitombo, na hikolokoloana amin'ny ambaratonga mitovy arakaraka ny valiny. Na izany aza, zava-dehibe ny hitadidiana fa ity fanafody ity dia fanafody tsy maintsy ampiasaina raha tsy ilaina raha tsy ilaina izany. Tokony ampiasaina indray mandeha ihany ao anatin'ny 24 ora izy io mba tsy hampitombo ny voka-dratsin'ny fanafody.
Ny loza ateraky ny doka tsy azony ho an'ny fanafody iray izay tsy tokony ho raisina raha ilaina dia saika tsy misy izany, zava-dehibe ny manazava ny torolàlana momba ny doka tsy hita. Izany dia satria ny fanafody dia voatendry ho an'ny fampiasana isan'andro, farafahakeliny intelo isan'andro raha ampiasaina amin'ny fitsaboana hypertension arteri-n'ny havokavoka sy hyperplasia prostatic benign. Raha misy fatra tsy tratra dia tsara kokoa ny misoroka an'io fatra io, ary tsy mila manonitra doka indroa amin'ny fotoana tsy ampoizina. Izany dia mety hiteraka vokam-paharetana lava sy tsy ilaina izay mety hiteraka fahavoazana saika mahafaty.
Iza no tsy tokony mampiasa vovoka Tadalafil
Tadalafil Powder dia manana tombony sy fampiasana isan-karazany saingy natao manokana ho an'ny lahy sy ny vavy indrindra ireo mihoatra ny 18 taona. Ny fanafody dia tsy tokony horaisin'ny vehivavy sy ny ankizy satria mety ho voan'ny risika bebe kokoa amin'ny fitrangan'ny voka-dratsy iraisana iraisana sy ny fahasarotana mifandraika amin'ny fampiasana Tadalafil Power.
Ireto olona manaraka ireto dia tsy tokony mihinana Tadalafil Powder, na manatona amin'ny dokotera alohan'ny hanombohany fanafody an'ny kilasy fanafody PDH5:
Olona manana tantara amin'ny fidirana an-tsehatra amin'ny fandidiana ao anatin'ny telo volana lasa
Ireo olona manana tantaram-pandrenesana ny fony nandritra ny telo volana ka hatramin'ny enim-bolana lasa
Ireo olona voan'ny hypertension sy hyperlipidemia
Olona voan'ny aretin'ny voa
Olona manana pigmentosa retinitis
Ireo olona voan'ny hemôfilia na marary saina hafa
Olona manana myeloma marobe, na leukemia
Olona mararin'ny vavony
Olona voan'ny lalan-dra na mety hiharan-doza noho ny fahatapahan'ny lalan-dra
Tsy mahazo mihinana Tadalafil ireo olona ireo satria ny fanafody ampiasain'izy ireo amin'izao fotoana izao dia afaka mifampiraharaha amin'ny zava-mahadomelina, ka miteraka fahasarotana atahorana ho faty. Amin'ny tranga sasany, ny vatan'ireto marary dia mety ho mora tohina kokoa amin'ny voka-dratsy ateraky ny zava-mahadomelina nefa tsy dia matotra fa ny hamafin'ny fahasarotana dia mety ho avo kokoa noho ny mahazatra.
Ny voka-dratsin'ny vovoka Tadalafil
Tadalafil Powder, toy ny ankamaroan'ny fanafody, dia misy voka-dratsiny marobe mifandraika amin'ny fampiasana azy. Na izany aza, tsy misy amin'izy ireo no matotra, manova ny fiainana isan'andro, na mandrahona ny ainy. Raha ny marina, ny ankamaroan'izy ireo dia hamaha samirery ary tsy mila fitsabahan'ny dokotera.
Ny voka-dratsin'ny Tadalafil dia misy, saingy tsy voafetra amin'ny:
Flushing; hafanana sy mena ny hoditra
Tinnitus; feo miantso maharitra eo amin'ny sofina
Olana amin'ny fandrenesana
Ny vokany farany dia somary matotra kokoa ary manondro fananganana maharitra sy maharary izay naharitra, matetika maherin'ny efatra ora. Amin'ny toe-javatra toy izany dia ampirisihina hangataka fanampiana ara-pitsaboana eo noho eo satria fahasalamana lehibe io, na dia tsy fahita firy aza, amin'ny fihinanana Tadalafil.
Hatramin'ny volana oktobra 2007, ny FDA dia mitaky ny kaonteneran'ny zava-mahadomelina PDE5 rehetra mba hampiditra marika fampitandremana izay ahafahan'ny mpampiasa mahafantatra fa ireo fanafody ireo dia mety hiteraka tsy fahatongavan-tsofina nefa tampoka ny fihainoana. Ity fanapahan-kevitry ny FDA ity dia vokatry ny fitarainana maro momba ny fahaverezan'ny fihainoana ireo marary mampiasa Tadalafil na zava-mahadomelina mitovy amin'izany izay nosoratana tamin'ny FDA, ka mitaky azy ireo handinika tsara ilay olana. Ny fikarohana nataon'ny FDA dia nahatsikaritra fa ny fihenan-tsofina dia vokadratsin'ny TAdalafil izay inoan'izy ireo fa ny marary rehetra dia tokony hampandrenesina, amin'ny teny mazava, mba hahafahan'izy ireo mandray fanapahan-kevitra.
Ny fahaverezan'ny fahitana dia fitarainana iray hafa matetika mifandraika amin'ny fampiasan'i Tadalafil ary rehefa nandinika ireo fitarainana ireo ny FDA dia hita fa ny vokatr'io dia nitranga indrindra tamin'ireo marary efa voan'ny aretin'ny maso, dia ny neuropathie optic ischemic non-arterite anterior na NAION. Satria tsy nisy antony sy vokany mivantana hitan'ny FDA, dia tsy misy marika fampitandremana mifandraika amin'ny fahaverezan'ny fahitana amin'ny vovoka Tadalafil na ny marika fanozonana hafaingoan'ny PDE5.
Fifandraisana mahazatra amin'ny rongony amin'ny vovoka Tadalafil
Ny fanafody sasany dia tsy tokony hiara-hientana satria afaka mifanerasera amin'ny tsirairay izy ireo ary samy miteraka fihenan'ny roa, ny fiakaran'ny vokan'ny roa, na ny fanamafisana ny voka-dratsy ateraky ny fanafody roa.
Tadalafil Powder dia fanafody toy izany izay tsy tokony hoentina miaraka amin'ireto fanafody manaraka ireto.
Antacids: Ireo fanafody ireo dia mifandray amin'ny Tadalafil ka miteraka fihenan'ny fahombiazan'ny zava-mahadomelina farany, na dia mbola tsy takatra aza ny rafitra tena izy. Na izany aza, zava-dehibe ny fampitandremana ny marary momba ny mety fifandraisan'ireto fanafody roa ireto, indrindra fa ny fanafody taloha dia fanafody mahazatra ao an-trano.
PDE5 Inhibitors: Ny fanjifana zava-mahadomelina miaraka amina fomba fiasa sahala amin'ny Tadalafil dia mety hiteraka fitomboan'ny fihenan'ny rà sy fihenan'ny ain'ny tosidra. Ny fampifangaroana ny tsindrona PDE5 roa samy hafa na ny fatran'ny doka roa mitovy amin'izany dia mety hiteraka fahasarotana fa tsy tombony fanampiny.
Alkoholika: ny fakana vovo-dronono Tadalafil amin'ny alikaola dia tsy mety miteraka fahasarotana manokana nefa mety hiteraka fitomboana lehibe amin'ny hamafin'ireo voka-dratsy io. Mety fahita matetika izy ireo amin'ny fisehoan-javatra, fa rehefa henjana dia mety tsy zaka intsony ary mety mila vonjy.
Nitrates: Ireo fanafody ireo dia ampiasaina amin'ny tanjon'ny fo ary ny asany lehibe indrindra dia ny fampitomboana ny rà mandriaka amin'ny alàlan'ny lalan-dra amin'ny alàlan'ny fiatraikany vasodilatory amin'izy ireo. Ity fomba fiasa ity dia mitovy amin'ny an'ny Tadalafil, noho izany ny fitambaran'ireo fanafody roa ireo dia miteraka fanitarana ny voka-dratsy ateraky ny fanafody roa tonta.
Anti Hypertensives: ny antony an'io dia mitovy amin'ny an'ny nitrates. Ny anti hypertensives sy Taladafil dia samy miasa amin'ny fampihenana ny tosidra amin'ny alàlan'ny lalan-drà vasodilating, izay raha miaraka izy ireo, dia miteraka fiakaran'ny tosi-dra ambany be izay mety hiteraka fahafatesan'ny olona, ​​raha tsy voatsabo.
CYP3A4 Inducers: CYP3A4 dia ny anzima tompon'andraikitra amin'ny famoahana ny fambolena Tadalafil avy amin'ny vatana aorian'ny nanatanterahany ny tanjony. Na izany aza, ny fanafody mampitombo ny vokatr'io anzima io dia miteraka famoahana ny Tadalafil, na dia talohan'ny nahatanterahany ny tanjony aza. Izany dia mahatonga ity farany tsy mahomby sy tsy misy ilana azy.
CYP3A4 Inhibitors: Ny zava-mahadomelina manakana ny fihetsiky ny anzima CYP3A4 dia miteraka fihenan'ny famafana ny Tadalafil izay hamela azy io ao amin'ny rafitry ny olombelona mihoatra ny ilaina. Ity vokatra maharitra ity dia tsy ilaina ary mety hampidi-doza amin'ny ankapobeny, izany no antony tokony hialana amin'ny fampifangaroana azy roa tonta amin'ny vidiny rehetra.
Guanylate Cyclase Stimulator: Ireo fanafody ireo dia mikendry ny vasculature an'ny havokavoka, mikendry ny hampihena ny tsindry amin'ny ra mikoriana ao aminy. Na izany aza, izany dia iray amin'ireo vokatra mahasoa sy fampiasana Tadalafil ihany koa. Ny fampiarahana ireo roa ireo dia mety hiteraka tosidra ambany dia ambany, izay mety hahafaty raha tsy voadinika ara-potoana sy ara-potoana.
Aiza no amidy ny Tadalafil Powder Sold?
Ny varotra ambongadiny Tadalafil Powder dia mahazatra kokoa noho ny varotra antsinjarany satria mazàna dia vidiana betsaka mivantana avy amin'ny orinasa mpanamboatra Tadalafil Powder. Amin'ny ankapobeny, ny fanafody manana ny maha-izy azy manokana dia matetika no vidiana amin'ny Internet satria manome fahalalahana sy fiainana manokana ilain'izy ireo ny marary. Ny fanafody dia misy amin'ny ankamaroan'ny fivarotam-panafody eo an-toerana sy an-tserasera fa ny marary kosa mila manana dokotera hahafahany mividy azy.
Fikarohana sy fampahalalana fanampiny momba ny fitsaboana
Tadalafil dia eo am-pikarohana sy dinihina hatrany mba hanombanana izay mety fampiasana fanafody hafa. Tadalafil no singa lehibe ao amin'ny fanafody isan-karazany, izay amidy amin'ny anaran'ny marika isan-karazany, ny ankamaroany ho an'ny aretina toy ny tsy fetezana erectile, hyperplasia prostatic benign, ary hypertension arterial pulmonary. Na izany aza, misy fanadihadiana isan-karazany izay naneho tamin'ny dingana voalohany fa ny Tadalafil, amin'ny ho avy, dia azo omena ho an'ny aretina hafa koa.
Ny iray amin'ireo fanadihadiana manan-danja indrindra tanterahina ao amin'ny Tadalafil dia mifantoka amin'ny fahombiazany sy ny fiarovana azy raha ampiasain'ny marary isan'andro iharan'ny erectile erectile. Navoaka tao amin'ny Gazety Fahasalamana Indoneziana ny fanadihadiana, ary miorina amin'ny fanadihadian'ny mpikaroka ny literatiora avy amin'ny tahiry elektronika, nanatsoaka hevitra fa ny fampiasana Tadalafil indray mandeha isan'andro dia mandaitra kokoa amin'ny fitsaboana ny tsy fihenan'ny erectile toy izay ny fampiasana fanafody raha ilaina.
Ny antony maha-zava-dehibe an'ity fandalinana ity dia ny fahafahany manova ny fomba fitsaboana amin'ny tsy fetezan'ny erectile. Na izany aza, ny fanadihadiana fanampiny dia mila atao alohan'ny hanovana ny drafitra fitsaboana.
Fikarohana iray hafa momba an'i Tadalafil dia mikendry ny hamerina ilay fanafody manaitaitra ny firaisana ara-nofo, miaraka amin'ny zava-mahadomelina an'ny kilasy iray ihany, vardenafil, hampiasaina amin'ny fitsaboana aretin-taolana. Ny aretin-taolana eto dia manondro ireo aretina izay osteoclast na sela manimba taolana dia miasa amin'ny hafainganam-pandeha avo kokoa ary amin'ny fahombiazany tsy mitovy amin'ny fiasan'ny osteoblast na sela mamorona taolana. Izany dia miteraka fihenan'ny taolam-paty izay mahatonga ny marary mora tohina amin'ny patologic.
Ny dingana in vivo an'ny fandinihana dia naneho fa ireo fanafody roa ireo dia tsy vitan'ny fampitomboana ny asan'ny osteoblast fa mampihena ny fiasan'ny osteoclasts. Afaka manao an'io ny zava-mahadomelina satria ny làlan'ny PDE5A no lakilen'ny famokarana ny fandanjana ny karazana sela roa. Ny làlana iray ihany no kendren'ny zava-mahadomelina amin'ny fitsaboana ny tsy fihanaky ny erectile. Taorian'ny fampiharana ny foto-kevitra in vivo momba ny maodelin-biby nataon'ny mpikaroka nitarika ity fandalinana ity dia hita fa ny fanafody roa dia safidy azo atao amin'ny fitantanana taolana mahasalama. Na izany aza, ny fanadihadiana fanampiny dia mila atao amin'ny vokatr'ireo fanafody roa ireo amin'ny taolana misy ny olombelona.
Ny fanadihadiana meta navoaka tao amin'ny Endocrinology Journal dia nampitaha ny fahombiazan'ny fitsaboana tadalafil, ny fitsaboana tamsulosin, ary ny tamsulosin miampy ny fitsaboana tadalafil amin'ny fanampiana ny fandroahana vato uretra. Ny tanjon'ny fandinihana dia tsy ny hahitana ireo fitsaboana mitambatra vaovao fotsiny hanampiana ireo marary amin'ny vato uretra fa mba hanombanana ihany koa ny fiarovana ireo drafitra fitsaboana ireo.
Ny fampiasana tadalafil irery na tadalafil miaraka tamsulosin no safidy roa izay hita fa mahomby indrindra ary tsy dia misy vokany ratsy. Ankoatr'izay, ny vokatry ny analgesika an'ny Tadalafil dia mety afaka manamaivana ny fanaintainan'ny ankamaroan'ny marary manana vato uretera ary ny fanafody dia manampy amin'ny fandroahana ilay vato amin'ny rafitra.